Ny Lamaody Zeorziana: Ny Zavatra Goavana Manaraka Ve ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2016 7:09 GMT
Lasibika iray miandry ny anjarany hiakatra an-tsehatra nandritry ny Herinandron'ny Lamaody tao Tbilisi , 31 Martsa. Sary an'i Monica Ellena. Nahazoana alàlana.
Ity manaraka ity dia lahatsoratry ny mpiaramiasa avy amin'ny EurasiaNet.org ary nosoratan'i Monica Ellena. Naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana.
Ny fanolorana tamin'ny Oktobra lasa teo an'i Demna Gvasalia, Zeorziana 35 taona, ho tale artistikan'ilay trano fampirantiana lamaody Balenciaga ao Parisy, dia nanampy hametrahana an'i Zeorzia, ilay firenena avy ao Kaokazy Atsimo, ho ao anaty sarintanin'ny lamaody erantany.
Fa na teo aza ny vintana ho amin'ny fisokafana iraisampirenana, nisafidy ny hijanona ao Tbilisi renivohitra Zeorziana ny sasany amin'ireo Zeorziana mpamorona lamaody. Mijanona any ry zareo satria tsapan'izy ireo fa misy toerana midadasika ao an-tanindrazany ho an'ny fakàna traikefa raha miohatra amin'ireo toeram-pifaneraseran'ny lamaody miorina any Andrefana.
Mbola vao mitsaika ny tontolon'ny lamaody ao amin'ilay repoblika tao anatin'ny firaisana Sovietika fahiny. Na izany aza, ireo Zeorziana mpamorona endrika, fatra-mpitety ireo tambajotra sosialy sy fianakaviana mifampidimpiditra ao amin'ny firenena, dia miteny fa mora ho azy ireo ny mahita ny toerany ao anatin'ity vondrom-piarahamonin'artista ity noho ny ao anatin'ireo La Meka naorina any Londona na Parisy.
Tsy mora mandrakariva anefa ny fanapahana hevitra hijanona akaikin'ny tanindrazana.
Fony vanimpotoana Sovietika, fomba fanehoana ny “indostria maivana” ny lamaody, fa tsy dingana misy famoronana. Tsy nanaraka tanteraka an'ireny jadona ireny ireo Zeorziana – notsipihan'ny votoatin'ireo sarimihetsika marobe mampiseho ny faran'ny vanimpotoana Sovietika. Saingy rehefa tonga ny fahaleovantena tamin'ny 1991, mbola nilain'ny indostrian'ny fanodinana ny nilona tao anatin'ireo hevitra ireo.
Aftandil Tskvitinidze, ela nihetezana tamin'ny lamaody Zeorziana, nampiranty ny asany tao Parisy, Astana, Baku ary Kiev. Sary an'i Monica Ellena. Nahazoana alàlana.
Avtandil Tskvitinidze, mpamorona endrika, izay efa tonga hatrany amin'ireo mpanjifa any Parisy sy Singapore ny akanjo sy kiraro vokariny, nanomboka taminà toeram-piasàna kely tany amin'ny tapaky ny taona 1990 tany, fony “zavatra niainana isanandro vaky ny fahatapahan'ny herinaratra [ary] zavatra tena nanahirana tokoa ny filazana hoe hiditra amin'ny resaka lamaody”, hoy izy. Fantatr'ireo mpamokatra lamaody fotsiny tamin'ny hoe Avtandil, tsy niala ny tanindrazany mihitsy i Tskvitinidze, 42 taona, ary tsy mbola manana faniriana hanao izany. “Efa tototra i Eoropa sy Etazonia,” hoy izy.
Ny toetsaina manao-ny-anao-manokana izay manjaka ao Tbilisi no toa nanampy nisarika mpividy lamaody sy mpampilatro iraisampirenena tsy nitsahatra nitombo. Ankoatry ny fanendrena an'i Gvasalia ho ao amin'ny Balenciaga, ny fanendrena ilay Zeorziana mpamorona endrika, David Koma, tamin'ny 2013 ho mpitarika ilay trano Frantsay fanjairana sy mpamokatra ranomanitra, Thierry Mugler, dia manome fanamafisana fanampiny hoe miditra amin'ny efa goavana ireo Zeorziana mpamorona endrika.
“Indostria iray mihodina mavitrika ny lamaody, ary tsy mitsahatra mijery hatrany izay fironana vaovao ireo matianina, mijery anarana vaovao sy fomba vaovao,” hoy i Maia Gogiberidze, 41 taona, tale jeneralin'ny Materia, orinasa mpamokatra lamba. Mitantana ny Matériel, anaran'akanjo iray malaza miampy ny Dots, marika tsotsotra iray ihany koa i Gogiberidze. “Ankehitriny i Zeorzia dia afaka manolotra an'izany fotsiny.”
Eken'ny toniandahatsoratra iray ao amin'ny Vogue Italy io. “Misy tokoa zavamitranga mety mahaliana, ary asehon'ireo Zeorziana mpamorona endrika ny faniriany hanosika ny fetran'ny fanandramana, na izany amin'ny resaka endrika na ny fitaovana,” hoy i Sara Maino, izay mitantana ny Vogue Talents, sehatra iray ety anaty aterineto ho an'ireo tanora mpamorona endrika eo an-dàlam-pisandratana.
Ny fahalinana mipetraka amin'ireo Zeorziana mpamorona endrika dia nitondra ho amin'ny famoronana herinandro roa samihafa ho an'ny lamaody – ny Herinandron'ny Lamaody ao Tbilisi, izay tsy ela akory izao no namarana ny fampirantiany rehefa lohataona, ary ny Herinadron'ny Lamaody Mercedes-Benz ao Tbilisi.
“Fony nanomboka izahay tamin'ny 2009, rantsan-tànana dimy dia efa ampy hanisànareo ny mpamorona endrika navitrika,” hoy ny tsiaron'i Tako Chkheidze, 35 taona, mpilatro fahiny ary iray amin'ireo mpanorina ny Herinandron'ny Lamaody ao Tbilisi. “Ankehitriny, misy eo amin'ny 60 eo. Efa mariky ny fahamarinan-toerana sy fitomboan'ny fironana hatrany izany.”
Tany aloha ireo vehivavy Zeorziana dia notsaratsaraina noho ny fitafiany akanjo tsotra sy mainty fotsiny. Ny zava-drehetra no hita tamin'ireo fantina naranty nandritry ny Herinandron'ny Lamaody tao Tbilisi ny 31 Martsa hatramin'ny 3 Aprily teo, fa tsy zavatra tsotsotra, niainga avy any amin'ny kisarisary ‘pastels’ an'i Diana Kvariani sy ny hetivolo malefaka sy miloko marevak'i Lako Bukia hatramin'ireo akanjo misary rebareban'ny tantsaha, miloko toy ny avana an'i Irma Sharikadze ary ireo amboradara feno firavak'i Anouki. Fitaovana miainga avy amin'ireo volom-biby, manaraka ny fombandrazana Zeorziana fahiny manafangaro ny volonondry Merino sy ny landy, amin'ny volory tsara tarehy, ny rovidamba ary ny rongony fotsy madinika.
Mbola mijanona ho kely ny tontolon'ny lamaody, ary eken'ireo manampahaizana sy mpamorona endrika fa mety hahazo tombony avy amin'ny herinandro iray tsotra natao ho an'ny lamaody i Tbilisi. “Mety hidika fampivondronana matanjaka kokoa, loharanonkarena fanampiny ary fametrahana ireo mpamorona endrika ho eny alohan'ny sehatra kokoa ny fampitambarana ireo hetsika ireo,” hoy i Maino avy amin'ny Vogue Italy. “Mety hahasarika matianina betsaka kokoa ihany koa ny herinandro iray atambatra sy atokana ho an'ny lamaody.”
Maia Gigoberidze, mpanorina ny magazay fivarotana akanjo Dots, ao amin'ny faritra iray manantantara ao Tbilisi, renivohitr'i Zeorzia, mifantoka amin'ireo akanjo tsotsotra. Sary an'i Monica Ellena. Nahazoana alàlana.
Ny tena fanamby atrehana ao Zoerzia dia ny fitadiavana vola hanosehana ny firoboroboana. Atosiky ny governemanta ny fampiasàna vola ho an'ny indostria mpanamboatra lamba, saingy tsy misy ny angondrakitra momba ny lanjan'ny sehatry ny lamaody ao amin'ny firenena.
Taorian'ny nanombohan'ny fanavaozana ireo orinasa tranainy noraisin'ireo Tiorka sy Zeorziana mpampiasa vola an-tànana tamin'ny fiandohan'ny taona 2000, tao anatin'ny fandrisihan'ny governemanta mba hisian'ny fampiasambolan'ny tsy miankina indrindra, niverina nipoitra ireo fotodrafitrasa fony vanimpotoana Sovietika mba hamatsy ny tsenan'ny lamba eo an-toerana sy hanondrana. Ankehitriny, araka ny angondrakitra ofisialy, misy eo amin'ny 200 ireo orinasa mpamokatra lamba, ny 93 isanjato amin'ireo no orinasa madinika miasa ho an'ny toeram-pivarotan'ireo marika toy ny Nike, Puma, Zara, ary Next.
Anatin'ireo mpamokatra lamaody, ny Matériel irery ihany, amin'ny alàlan'ny orinasa reniny, no mamokatra eo an-toerana ny akanjony. Amin'izao fotoana anefa Avtandil dia manorina ny orinasany manokana any amin'ny faritra manodidina an'i Tbilisi.
Mivarotra ny asany amin'ny alàlan'ireo tranokely fampirantiana na mamokatra zavatra iray tsy miverina ireo mpamorona endrika monina ao Tbilisi. Tsy maintsy afarana ny ankamaroan'ireo akora satria ny fanambàrana matetika no tena imasoan'ireo orinasan-damba Zeorziana, fa tsy mamorona vokatra vaovao.
Lako Bukia, Zeorziana mpamorona endrika, 28 taona notinaizan'ny Britanika sy ny Amerikana ary naseho nandritr'ireo Herinandron'ny Lamaody tao Londona, milaza fa ny toedraharaha ara-toekarena dia loza mitatao mety hanakenda ireo mpanantalenta nisondrotra tao an-tanindrazany. “Saina mpamorona tsy mampino ry Gvasalia sy Koma, saingy isalasalàko ny hahatongavan-dry zareo any amin'ireo tranobe iraisampirenena, raha toa ry zareo [ni]janona teto,” hoy izy.
Sophia Tchkoria, mpandraharaha niketrika ny Herinandron'ny Lamaody Mercedes Benz sy ny BeNext, fifanintsanana iray fanao isantaona ho an'ireo tanora mpamorona endrika hianatra any ivelany, nilaza fa ireo mpamorona endrika dia mila ihany koa fahafehezana bebe kokoa ny lafiny fandraharahan'ny lamaody.
“Misy ny talenta, saingy tsy ampy izany,” hoy i Tchkoria. “Mila hitan'ny olona isika, [miaraka] amin'ny fampianarana avo lenta sy fiarahana miasa amin'ny indostrian'ny famokarana mba hamaliana ny tinadin'ny mpividy.”
31 Marsa 2021Armenia